ओली यसकारण चाहन्छन् भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता ! | Daily State News
ओली यसकारण चाहन्छन् भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता !
११ चैत्र २०७४, आईतवार १२:०० मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
तीन दिनभित्र दुवै कार्यदलले मस्यौदा बुझाउने, हाइकमाण्ड बैठक बस्दै
११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा बलियो शक्तिसाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बन्न चाहन्छन् ?
भारत भ्रमणमा निस्कनुपूर्व पार्टी एकता गर्ने ओलीको चाहना सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न उठेको हो ।
एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले दुईतीन दिनभित्रै दुवै कार्यदलले आफ्नो काम सिध्याउने बताए । त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर बाँकी विषय टुंगो लगाउनेछ । ७ फागुनमा भएको सातबुँदे सहमतिले पार्टी एकता गर्ने आधार तय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि एकता हुनसक्ने पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।देशभित्र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षका हैयितमा भारतीय नेताहरुसँग प्रस्तुत हुन खोजेको अनुमान गरिएको छ । ओलीको यहि चाहना बुझेरै पार्टी एकता सम्बन्धी सांगठानिक र राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्न गठित कार्यदलले ढिलोमा तीन दिनभित्र आ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदैछन् ।
एमाले र माओवादीबीच एकीकरणको घोषणा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिन अर्थात २२ अपि्रलमा हुने भनिएको थियो । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएकाले पार्टी एकता अगाडि सार्न खोजिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एकताबारे संशय पैदा नहोस् र ओली जनमत तथा संगठनको हिसाबले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगोस भन्ने आशय यहाँ झल्किएको छ ।
ओलीका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्येका एक बनिरहेका छन् । उनीसँग करीव दुई तिहाई बहुमत छ भने पार्टीमा पनि उनको एकछत्र राज छ । भारतका अधिकांश प्रान्तीय सरकारमा पनि मोदीको पार्टी बिजेपीले क्लिन स्वीप गरिरहेको छ ।
पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसार २०१९ को चुनावमा पनि भारतमा मोदीलाई कसैले चुनौती दिने छैन ।
यता नेपालमा पनि यो वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको एमालेले विजय हासिल गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै लडेर पहिलो बनेको एमाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका नेतृत्व गर्दै गर्दै तत्कालिन सत्तारुढ कांग्रेसलाई ‘क्लिन स्वीप’ को अवस्थामा पुर्‍याउन सफल भयो । जसको तरंग अहिले पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रकट भइरहेको छ ।
विदेश भ्रमणमा निस्कनुअघि पार्टी एकता गर्न चाहानुको अर्थ हो-अब नेपालमा स्थायित्व भयो, विकास र सम्बृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग होस्
भारतमा तलदेखि माथिसम्म बिजेपीले सत्ता सन्चालन गर्न पाए जस्तै नेपालमा पनि तलमाथि माथिसम्म (प्रदेश २ बाहेक) वामपन्थी गठबन्धनको सत्ता सञ्चालन हुँदैछ । त्यसैले ओली पार्टी एकता गरेर विदेशीहरुमाझ बलियो नेताका रुपमा प्रस्तुत हुन चाहान्छन् ।
भारतमा मोदी र चीनमा शी जिनफिङ शक्तिशाली बनिरहेका बेला ओलीले दुवै देशको भ्रमणअघि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहेको कुरा लुकाउन सकिन्न ।
चीन र भारत दुवै छिमेकीले धेरै वर्षदेखि नेपालमा स्थायीत्व, शान्ति र विकास देख्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । स्थायित्वबिना विकास, शान्ति र सम्बृद्धि नहुने भनिरहेका बेला नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेर स्थिर सरकार बनेको छ ।
एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा रुपान्तरण गरेर स्थायित्वको सन्देश दिन चाहेका छन् ओलीले । विदेश भ्रमणमा निस्कनुअघि पार्टी एकता गर्न चाहानुको अर्थ हो-अब नेपालमा स्थायित्व भयो, विकास र सम्बृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग होस् ।
के हुँदैछ एकीकरणको गृहकार्य ?
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दस्तावेजको मस्यौदा गर्न गठित कार्यदलले काम टुंग्याउन लागेका छन ।कार्यदलका सदस्यहरु मन्त्री भएकाले समयभित्र काम सम्पन्न नभएको नेताहरुले बताएका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक दस्तावेज कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरेको छ ।
दुबै कार्यदलमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनार्दन शर्मा बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् भने एमालेबाट बिष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् । यद्यपि कार्यदलले आफ्नो काम लगभग टुंग्याएको पौडेलले बताए ।
सिद्धान्त मालेः संगठन लेनिनवादी
एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद रहने सहमति भइसकेको छ ।
एमालेले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अंगीकार गरेको माओवादलाई अर्को महाधिवेशनसम्म बहसमा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको छ ।
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा चल्नेछ । अर्थात पार्टी सदस्य कमिटीको अधिनस्थ रहने र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ रहनेछन् । पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद हुनेछ तर अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ रहनुपर्नेछ । नमिलेका विषयहरु महाधिवेशनबाट टुंगो लाग्नेछ ।
कस्ता कमिटी, कसकोे नेतृत्व ?
एमाले र माओवादीबीच माथिबाट एकीकरण प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सबैभन्दा पहिले केन्द्रीय कमिटी एकीकरण हुनेछ ।
त्यसपछि प्रदेश जिल्ला हुँदै वडातहमा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ढिलोमा २ वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने अन्तरिम विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ ।
महाधिवेशनअघि पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्षका रुपमा रहने र अरु पदाधिकारी नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरुमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । तर, यसअघि अभ्यास भएको ६०/४० र ७०/३० कै अनुपातमा कमिटीहरुमा नेतृत्व हुनेछ । यद्यपि यसपटक एमाले र माओवादीबीच कमिटीहरुको एकीकरण हुँदा प्रतिशत उल्लेख हुने छैन । तर, पार्टीको आकार अनुसार अधिवेशनसम्म तदर्थ कमिटी गठन गर्दा एमालेले ६० प्लस र माओवादीले ३५ प्लसको आधारमा नेतृत्व पाउनेछन् ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय हुने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल नभएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । उनका अनुसार पहिले अन्तरिम विधानका सैद्धान्तिक कुरामा सहमति जुटाएपछि मात्र संख्याबारे छलफल हुनेछ ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटी गरी केन्द्रमा तीन संरचना हुनेछन् । त्यस्तै केन्द्रभन्दा तल प्रदेश कमिटी कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला कमिटी पनि कार्यकारी नै हुनेछ । एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको पनि प्रस्ताव गरेको छ, जसले महाधिवेशन नभएको बेला बिधान पारित गर्ने लगायतका काम गर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलग अलग कमिटी हुनेछन् । तर, एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी हुने छैन । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीपछि स्थानीय तहस्तरीय कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटीहरु पनि कार्यकारी रुपमै रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीहरु रहनेछन् ।
वाईसीएलसहित केही संगठनमा समस्या
जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरुको एकीकरण विधि पनि यहि कार्यदलले तय गर्नुपर्नेछ । एमाले र माओवादीबीच अधिकांश भातृ संगठनहरु एकै प्रकृतिका रहेकाले खासै विवाद छैन ।
तर, केही संगठनहरुको एकीकरणका लागि अझै छलफल बाँकी प्रवक्ता गोकर्ण विष्टले बताए ।
माओवादीले योङ कम्युनिस्ट लिग -वाइसीएल)लाई पार्टीको सहायक संगठन भनेको छ । एमालेले युवा संघलाई जनसंगठन भनेको छ । यी दुई संगठनको एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही विवाद छ । त्यस्तै माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेना संगठन, बेपत्ता, घाइते र शहीद परिवारका संगठनहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी छ ।
स्रोतका अनुसार युवा संघ र वाइसीएल मिलाएर युवा लीग नेपाल राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै माओवादीको पूर्व पिएलए संगठनलाई एमालेको पूर्व सैनिक र पूर्व प्रहरी संगठनसँगै समायोजन गर्ने विधिमा छलफल भइरहेको छ ।
दुवै पार्टीका जनसंगठनको नामको पछाडिको पुच्छर हटाइने छ । उदाहरणका लागि एमालेको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु छ । माओवादीको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी छ । अब एकीकृत संगठनको नाम अनेरास्ववियुमात्र रहनेछ ।
अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, मजदूर संगठनहरुको पनि सोही नाम रहनेछ ।
तर पेशागत संगठनहरुको समायोजनमा भने समस्या देखिएको छ । माओवादीले निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षा लगायतका अलगअलग महासंघ बनाएको छ । तर, एमालेले भने सबै घटक संगठनहरुको पेशागत महासंघ बनाएको छ । सम्भवतः पेशागत महासंघकै छातामुनी सबै पेशाकर्मी संगठनहरु रहनेछन् ।